Shaybaadhka COVID-19 | Multnomah County
Waxaa la cusboonaysiiyay 6, 2021
Waa inaad is shaybaadho haddii aad leedahay calaamadaha COVID-19 ama haddii aad la kulantay una dhawaatay qof qaba COVID-19. La kulanka dhow waxaa laga wadaa inaad ujirsato 6 fuudh qof muddo 15 daqiiqo ah ama in ka badan maalin gudaheed iyada oo uu qofku xidhan yahay ama uusan xidhnayn maaskaro.
Haddii aad is shaybaadhayso maadaama oo aad kulan dhow la yeelatay qof qaba COVID-19, waxa ugu fiican inaad sugto ugu yaraan 4 cisho kadib markii aad isu timaadeen kahor inta aanad is shaybaadhin. Waxaa laga yaabaa in baaritaanku uusan shaqayn haddii si degdeg ah laguu baaro. Waa inaad guriga joogto kana fogaato dadka kale marka aad sugayso.
Waxa aad iska shaybaadhi kartaa xafiiska dhakhtarkaaga ama xarun caafimaad. Haddii aanad lahayn dhakhtar, waxa aad iska shaybaadhi kartaa goob shaybaadh bulsheed ah.
Goobaha Shaybaadhka ee Bulshada
Shaybaadh bilaash ah ayaa diyaar u ah ka dib marka ballan uu samaysto qofkasta oo leh calaamadaha ama qofkasta oo kulan dhow la yeeshay qof qaba COVID-19.
Wac 503-988-8939 si aad ballan u qabsato ama aad uhesho macluumaad dheeraad ah. Tarjumaano ayaa diyaar kuu ah.
Meelaha ay ku yaallaan iyo Saacadaha Goobaha
Saacadaha goobta baritaanka ama meelaha ay ku yaallaan waa ay is beddeli karaan, goobo cusub ayaana lagu soo dari karaa. Wac si aad u hesho hadba wixii cusub.
Shaybaadhka Bulshada ee Xarunta Caafimaadka ee Gobolka East - Baarkinka Gawaadhida
600 NE 8th St, Gresham
Isniinaha iyo Khamiisaha - 9:00 g.h. illaa 3:45 g.d.
Xarunta Jaamacadda PCC Cascade - Shuraakada REACH
705 N Killingsworth St, Portland
Arbacaha, 11:00 g.h. – 6:00 g.d.
Shaybaadhka Bulshada Gobolka Mid - IRCO
10301 NE Glisan St. Portland
Jimcayaasha, 12:00 g.d. – 6:00 g.d..
Shaybaadhka Bulshada Rockwood - Shabakadda Latino
312 SE 165th Ave. Portland
Sabtiyada - 9:00 g.h. illaa 3:45 g.d.
Shaybaadhka, sharciga soo geleetinimo iyo lacagta dadweynaha
Uma baahnid inaad noqoto bukaan kasoo jeeda Gobolka Multnomah ama inaad yeelato caymis caafimaad si aad isaga shaybaadho goobahayaga bulshada.
Waa lagu shaybaadhi karaa iyadoon la eegayn sharcigaaga soo galeetinimo.
Lama wadaagayno xogtaada fulinta sharciga ama sarkaallada socdaalka.
Dhaqan gelinta Socdaalka iyo Kastamyada waxa ay leeyihiin siyaasad taasoo ka hortagaysa in la xidho dadka ku sugan xarumaha daryeelka caafimaad, sida isbitaalada, xafiisyada dhakhtarada, xarumaha caafimaad ee bukaan socodka, iyo xarumaha daryeelka xaaladaha degdegga ah.
Haddii aad hesho daawayn caafimaad ama adeegyo la xidhiidha COVID-19, ma aha mid carqalad kugu noqon karta marka aad codsanayso deggenaanshiyaha daa’imka ah ee United States ka. Ka akhri xog dheeraad ah oo ku saabsan Lacagta Dadweynaha.
Xarumaha Shaybaadhka ee OHSU
Wac 833-647-8222 ama booqo barta internetka ee OHSU da si aad uhesho goobaha iyo xog dheeraad ah.
Warqadda Shaybaadhka >>
Ka dib marka lagu shaybaadho
Haddii lagaa helo cudurka
Tallaabada 1: Joog guriga kana fogow dadyawga kale, xattaa dadka aad la nooshahay. Haddii aad adigu leedahay calaamado, waxa aad dadka kale ag joogi kartaa kaddib:
Marka aad bilaa xummad noqoto 24 saacadood adiga oo aan isticmaalin dawada xummada, IYO
Marka calaamadaha aad ka ladnaato, IYO
Marka ugu yaraan 10 maalmood ay kasoo wareegtay illaa markii koowaad ee aad calaamadaha yeelato
Haddii aanad adigu lahayn calaamado, waxa aad dadka kale ag joogi kartaa kaddib:
Marka 10 maalmood ay kasoo wareegeen illaa markii aad is baadhay, oo iminka aadan lahayn wax calaamado ah
Dadka aad la nooshahay sidoo kale waa inay joogaan guriga kana fogaadaan dadka kale ee ka baxsan gurigiina muddo 14 cisho ah. Haddii aad qabto wax su’aalo ah oo ku saabsan wax kamid ah arrintan, wac dhakhtarkaaga.
Tallaabada 2: Usheeg dadka kuu dhowdhow sida ugu dhakhsiyaha badan in shaybaadh lagaaga helay cudurka. “Qof kuu dhow” macneheedu waxa ay tahay qof aad ag joogtay muddo 15 daqiiqo ah maalin gudaheeda, adigoo xidhan ama aan xidhnayn maaskaro. Usheeg inay tahay inay joogaan guriga muddo 14 cisho ah laga soo bilaabo wakhtigii udambeeyay ee ay ku ag joogeen iyo inay iska shaybaadhaan COVID-19, xattaa haddii aanay lahayn wax calaamado ah.
Haddii aad adigu yeelato calaamado: la xidhiidh dadka aad kulan dhow la yeelatay laga bilaabo 2 cisho kahor inta aanad calaamadaha yeelan.
Haddii aanad adigu yeelan calaamado: la xidhiidh dadka aad kulan dhow la yeelatay laga bilaabo 2 cisho kahor inta aanad shaybaadhkaaga COVID-19 aadan samayn.
Tallaabada 3: Hel caawimo haddii aad ubaahan tahay. Wac 2-1-1 haddii aad caawimo uga baahan tahay is-go'doominta ama is-kaarantiimaynta. Waxa ay kaa caawin karaan inaad hesho khayraadka laga yaabo inaad u baahatid (raashin, kaalmo lacageed, caawimo dhanka kirada ah, waxyaalaha kale ee lagama maarmaanka ah).
Shaqaale caafimaadka dadweynaha ah ayaa laga yaabaa inuu kusoo waco. Waxa ay kaloo kaa caawin karaan inaad la xidhiidho dadkii aad kulanka dhow la samaysay haddii aad caawimo ubaahato. Fadlan ka jawaab wicitaankooda. Lama wadaagayaan xogtaada sarkaalada socdaalka ama fulinta sharciga.
Hadii shaybaadhka lagaaga waayo COVID-19
Haddii aad ka ag dhawayd qof COVID-19 qaba, sii wad inaad guriga joogto illaa 14 cisho ay dhaaftay markii aad lakulantay--tani waxa la yidhaa iskaarantiimayn. Inaad guriga joogto oo aad ka fogaato dadka kale ee aanad la noolayn 14 cisho waa sida ugu ammaanka badan ee aad uga hortagi karto inaad ku faafiso COVID-19 dadyawga kale.
Haddii aanad lahayn wax calaamado ah, oo aanad ka shaqayn wakhtina ku qaadan goob koox dad ahi kuwada nool yihiin-- sida xarunta daryeelka ee muddada dheer -- waxa aad iskaarantiimaynta soo gebogebayn kartaa ka dib 10 cisho. Haddii aad la nooshahay qof khattar ugu jira inuu yeesho xanuun daran, iskaarantiimee 14 cisho oo buuxa. Wac dhakhtarkaaga haddii aad yeelato wax calaamado ah.
Sii wad inaad naftaada ilaaliso iyo dadyawga kale: xidho maaskaro, ka fogow dadyawga kale 6 fuudh, gacmahaagana si joogto ah u maydh.
Somali COVID-19 Talooyin Ka Hay'adda Caafimaadka ee Dadweynaha
Dabagalka xiriirka | Contact Tracing (Somali)
Dabagalka xiriirku waa qalab ay bahda caafimaadka dadweynaha u isticmaalaan iney ku joojiyaan faafitaanka cudurada. Jawaabaha aad siineyso marka uu ku soo waco shaqaalaha caafimaadka dadweynahu waxay caawineysaa in la joojiyo faafitaanka caabuqa COVID-19.